Sh. Sudays oo markale muran dhaliyey kaddib markii uu Masjidka Maka ka jeediyey khudbad lagu taageerayo xiriirka Israel (Arag jawaabaha) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Sh. Sudays oo markale muran dhaliyey kaddib markii uu Masjidka Maka ka...
Sh. Sudays oo markale muran dhaliyey kaddib markii uu Masjidka Maka ka jeediyey khudbad lagu taageerayo xiriirka Israel (Arag jawaabaha)
(Maka) 07 Sebt 2020 – Sh. Abdulrahman al-Sudais, oo ah Imaamka Masjidka wayn ee Xaramka Maka, ayaa dood ka dhex dhaliyey caalamka Islaamka kaddib markii uu Khudbadda Jimcaha uu kusoo qaatay wacdi loo fasirtay mid uu ku dhiirri gelinayo inuu Sucuudigu xiriir toos ah la sameeysto Israel.
Sudais ayaa khudbadda ku faahfaahiyey sida ay u wanaagsan tahay in loo naxariisto dadka aan Muslimka ahayn, isagoo weliba gaar u xusay Yuhuudda.
Warka Sheekha ayaa imanaya 4 todobaad uun kaddib markii uu Imaaraadku ku dhawaaqay inuu xiriir rasmi ah la yeeshay Israel iyadoo horayba loo hadal hayey inuu Sucuudiga, oo si kastaba xiriir nooc uun ah la lihi, uu soo raaci doono.
Imaamka ayaa soo qaatay in la bedelo “khaladka laga fahamsan yahay sida loola xaalo dadka aan Muslimka ahayn iyo xiriirka lala yeelanayo”.
Wuxuu soo qaatay sidii uu Nabi Muxamed (NNKH) uu u wajihi jirey dadka aan Muslimka ahayn oo uu si sharaf leh ula macaamili jirey, isagoo soo qaatay Nabiga (NNKH) oo ku waysa qaatay biyo ay lahayd haweenay aan Muslim ahayn, xiriirkii uu la yeeshay Yuhuuddii Khaybar, iyo sidii uu u wanaajiyey Yuhuud deris la ahaa oo markii dambe Muslimay.
“Markii laga tago wada hadal caafimaad qaba waxaa isku dhacaya xadaaradaha, waxaana soo baxaya gacan ka hadal, iskala sooc iyo nacayb,” ayuu yiri Sh. Sudais.
BARAHA BULSHADA – Yeelkeede, dadwaynaha ayaanay u laqmin khudbadda Sheekha iyadoo ay qaarkood ku eedeeyeen inuu samaynayo marin habaabin, balse aysan is keenaynin taariikhda uu soo daliishanayo ee Nabiga (NNKH), iyo xaaladda iminka taagan, gaar ahaan xilli heshiis lala gelayo Yuhuud kibirsan oo aan waxba uga tanaasulin Muslimiinta.
Mid baa soo qoray: ”Khudbadda Al-Sudais, ee ku saabsan caadiyaynta xiriirka Israel waxay muujinaysaa in kabaha carruurta Falastiin ay ka nadiifsan yihiin gerarka wadaadada qaarkood…
Ma aha markii koowaad ee uu Sudais muran dhaliyo. Sanadkii 2017-kii, waxaa lagu cambaareeyey hadal uu ku sheegay in MW Muslimka neceb ee Donald Trump iyo MBS ay “dunida nabad u horseedayaan”.
Mid kale ayaa yiri: “Sidee noogu khudbaynaysaa nabad la hirgeliyo, adigoo baahi ku dilaya walaalahaa Yaman iyo Qadar?”
Dad kale ayaa soo qaatay sida ay isu burrinayaan wararka Sheekhu, marka la eego khudbadihii hore ee uu isla isagu jeedin jirey ee Israel ka dhanka ahaa iyo kuwan cusub.
Previous article”Somalia waxay asaaska u dhigaysaa u guuritaanka dhijitaalka waana dhaaftay Kenya!” – Businessdailyafrica
Next articleDoorashada Madaxtinnimada ee 2021 oo laga yaabo in la marin habaabiyo (Yaa arrintaa ku lug yeelan kara?)